खोपको असर: महिलाहरुमा उच्च रक्तस्राव र महिनावारी रोकिने समस्या । – Janapriyakhabar
मुख्य पृष्ठ / जीवनशैली / मुख्य खबर / यौन/स्वास्थ्य / समाचार
नेपालमा कोभिडविरुद्ध खोप लगाएपछि कतिपय महिलाहरूले महिनावारीमा प्रभाव परेको बताइरहेका छन्। उनीहरूले महिनावारी ढिला हुने, रक्तस्राव धेरै हुने र महिनावारीका बेला हुने दुखाइ बढेको बताएका छन्। तर चिकित्सक र विज्ञहरूले खोपकै कारणले यस्तो प्रभाव परेको प्रमाणित नभएको बताएका छन्। कुनै पनि खोपले रोग प्रतिरोधी क्षमता र हार्मोनमा असर पार्ने भएको हुँदा खोपपछि महिनावारीमा केही फेरबदल सामान्य रहेको उनीहरू बताउँछन्। नियमितभन्दा करिब दुई साता बित्दा पनि महिनावारी नभएपछि पूजा पराजुली आत्तिइन्।
इलामकी २८ वर्षीया उनले सुरुमा गर्भ जाँच गराइन्। नतिजा नकारात्मक आयो। त्यसपछि स्थानीय चिकित्सककहाँ गएर आफ्नो समस्या सुनाइन्। चिकित्सकले कहिलेकाहीँ महिनावारी तलमाथि हुनु सामान्य रहेको बताए। सामान्यतया नियमित महिनावारी हुने पराजुलीको ढिलो भएको रक्तस्राव लगातार एक सातासम्म भयो। रक्तस्राव पनि नियमितभन्दा धेरै भयो। “डर लागेको थियो। चिकित्सकले सामान्य भने पनि महिनावारी ढिला हुनु वा रक्तस्राव धेरै हुनुको कारण खोज्दै थिएँ,” पूजा भन्छिन्।
खोज्दै जाँदा अन्य केही महिलाले कोभिड खोप लगाएपछि महिनावारीमा समस्या भोगिरहेका प्रतिक्रिया उनले देखिन्। “फेसबुकमा महिलाहरूको एउटा समूहमा कैयौँले कोभिडको खोप लगाएपछि महिनावारी ढिला भएकोदेखि रक्तस्राव धेरै भएको र पेट अत्यधिक दुखेकोबारे गुनासो गरेको पाएँ,” उनले भनिन्। उनले गत जेठ २८ गते भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकी थिइन्। त्यसयता उनको महिनावारी प्रभावित भएको हो।
काठमाण्डूकी सरु घिमिरेले साउन ४ गते जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइन्। त्यसको केही दिनपछि अस्वाभाविक ‘ह्वाइट डिस्चार्ज’ अर्थात् सेतो पानी बगेको र त्यसमा जमेको रगत मिसिएको उनले बताइन्। असामान्य महिनावारी “सङ्क्रमण भयो कि भन्ने सोचेँ। अस्पताल जानुअघि नै महिनावारी भयो। तर महिनावारी सामान्य थिएन,” घिमिरेले भनिन्। “रक्तस्राव पनि एकदम धेरै भइरहेको थियो र रगत धेरै जमेकोजस्तो देखिन्थ्यो।”
सुरुमा त खोपको प्रभाव होला भन्ने लागेको थिएन। आफ्नै महिनावारी प्रभावित भएपछि भने खोपले पार्ने असरहरूबारे खोज्न थालेँ,” उनले सुनाइन्। कीर्तिपुर बस्ने सन्दीपा खत्रीले पनि खोपपछि दुई वटा मासिक चक्र अत्यधिक पीडादायी भएको बताएकी छन्। यो समस्या सधैँ उस्तै रहन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताएको उनी सुनाउँछिन्। ‘खोपकै असर भन्न सकिन्न’
सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य माध्यममार्फत् महिलाले महिनावारीमा समस्या भोगेको बताइरहेको पाइए पनि अस्पतालमा भने त्यस्ता महिला नआएको परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्र बताउँछिन्।
“कोरोनाभाइरस र खोपका कारण महिलाहरूमा चिन्ता र तनाव बढेको छ जसको प्रभाव महिनावारीमा परेको हुनसक्छ। तर खोपले नै असर पार्‍यो भन्न अध्ययन भइसकेको छैन,” डा. मिश्रले बताइन्। उनले खोप लगाएपछिको पहिलो महिनावारी ढिलोचाँडो हुनु सामान्य रहेकाले नआत्तिन सुझाव दिइन्।
प्रभाव दोस्रो या त्योभन्दा बढी महिना दोहोरिएको अवस्थामा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने डा. मिश्रको भनाइ छ।
खोपले महिनावारीमा प्रभाव पार्छ?
कोभिड-१९ विरुद्ध खोपपछि महिनावारीमा असर परेको नेपाल मात्र नभई अन्य देशका महिलाहरूले पनि बताएका छन्। खोप लगाएका महिलाहरूले महिनावारी ढिलो वा चाँडो भएको र उच्च रक्तस्राव भएको अनुभव सुनाएका छन्। मेडिकल मानवशास्त्री डा. केट क्लेन्सीले नै मोडर्ना खोप लगाएपछि भोगेको उच्च रक्तस्रावबारे ट्वीट लेखेकी थिइन्।
उनको ट्वीटमा दर्जनौँले प्रतिक्रिया जनाए जसमध्ये पारलिङ्गी र महिनावारी रोकिएका महिलाहरूले पनि थिए। उनीहरूले रक्तस्राव भएको उल्लेख गरेका थिए। महिनावारीमा देखिएका यस्ता समस्याहरू खोपकै असर हुन् भन्ने पुष्टि नभएको तर खोपले महिनावारीमा प्रभाव पार्न सक्ने आधारहरू रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
इम्पेरीयल कलेज लन्डनकी रिप्रोडक्टिभ इम्युनोलोजिस्ट डा. भिक्टोरिया मेलले कोभिड खोपपछि महिनावारीमा केही फेरबदल भएको अवस्थामा आत्तिनु नपर्ने बताएकी छन्। उनी भन्छिन्, “जीवनभर यस्तै होला कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने विषय होइन। कोभिडको मात्र नभई अन्य खोप लगाएपछि पनि महिनावारीमा केही फेरबदल हुन्छ।
” मेलका अनुसार खोप लगाएपछिको एक वा दुई वटा मासिक चक्र प्रभावित रहन्छ। उनले प्रतिरक्षा प्रणालीले ‘सेक्स हार्मोन’लाई प्रभावित पार्ने र उक्त हार्मोनले असर पार्दा यस्तो हुने उनले बताएकी छन्। महिलाको महिनावारीका लागि जिम्मेवार सेक्स हार्मोनहरू ओएस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन खोपले प्रभावित हुने उनले बताइन्।
साहरुख भन्छन् : पोर्न स्टार बन्ने सोख छ ।